Iyo Apple Watch Series 3 inosvika muchikamu chakadzoserwa cheAmerican Apple Store | IPhone nhau
Iyo Apple Watch Series 3 inosvika muchikamu chakadzoserwa cheAmerican Apple Store
Pakutanga mwedzi uno, vakomana vanobva kuCupertino vakatanga kunyora iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus iri kutengeswa muchikamu chakadzoserwa chemidziyo. Mavhiki mashoma gare gare yaive nguva yeApple Watch Series 3, chigadzirwa chakarova pamusika munaGunyana apfuura.
Parizvino, Apple yakangobatanidza iyi modhi, iyo vhezheni isina LTE, muAmerican Apple Chitoro, saka zvingangoitika kuti munguva pfupi yapfuura, iyo yese yeApple Chitoro yakaparadzirwa pasirese tanga kupa iyi imwechete modhi pamutengo wakaenzana.
Parizvino, iyo Apple Series 3 inowanikwa mune zvese zviri zviviri 38mm uye 42mm uye Space Grey uye Pink mavara. Mauniti ese ari maviri vane dhisikaundi yemadhora makumi mashanu zvichienzaniswa nemutengo wavo wenguva dzose. Tichifunga nezvekuti zvigadzirwa zvese zvinosvika muchikamu chino zvakaongororwa neApple uye kuti zvinotipa vimbiso imwechete seyatsva, zvinogona kuti panzvimbo pekutenga chechipiri-ruoko, zvinonyanya kufadza kumira iyo Apple Chitoro pamhepo uye Tora mukana izvi zvakagadziridzwa zvishandiso, zvishandiso zvinotengeswa mubhokisi idzva chena pamwe nechaja inoenderana.
Kunyangwe chiri chokwadi kuti mune yechipiri-ruoko musika iwe unogona kuchengetedza mari shoma, iyo vimbiso yekuti Apple inotipa isu inogara ichibhadhara mari yezvakawanda kupfuura zvatinogona kuita. Parizvino, iyo Apple Watch Series 3 LTE haisati yasvika pachikamu ichi cheyakagadziridzwa, asi inofungidzirwa kuti ichakurumidza kana kumberi, nekuti zvese zvinoenderana nehukuru hwekutengesa uye / kana kudzosera izvo mudziyo unazvo.
Ehe, haufanire kufunga nezvazvo zvakanyanya Nekuti seiyo iPhone, zvigadzirwa izvi zvinowanikwa mune mashoma mayuniti uye kana zvapera, iwe unofanirwa kumirira zvakare kwechinguva kusvikira Apple yavandudza stock yemhando iyi yechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 3 inosvika muchikamu chakadzoserwa cheAmerican Apple Store
Nei Apple ichishandisa ndangariro dzeChinese mumidziyo yayo kutengeswa muhofori yeAsia?